ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ ဆန်ဖွဲအိတ်များ မှအရည်အသွေးမြင့် ဆန်ဖွဲအိတ်များ ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
Summer Show Plastic Corporation PP နှင့် PE ယက်ထည်ပစ္စည်းများကိုလက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်သည် Taiwan။ ငါတို့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တင်ပို့ ဆန်ဖွဲအိတ်များ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကမ္ဘာကြီးကိုထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Poly ယက်ထည်ပစ္စည်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည့်ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အလုပ်ကိုမဆုတ်မနစ်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
သင်တစ် ဦး ဒီဇိုင်းရှိပါက
သိုမဟုတ်အခြားကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုများကိုစိတ်ထဲတွင်ထားပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဆွေးနွေးဘို့
ပုံစံ - F-SERIES-05
Strip count က:12 အတိုင်*၁၀ ရက်
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်:90 ဂ&ကျော်သူ;အိတ်နှုန်း 5g
ဘုံအသုံးပြုမှု:အမျိုးမျိုးသောမုန့်ညက်နှင့်ဖွဲနုထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်ရန်စက်မှုနှင့်စီးပွားဖြစ်အရွယ်အိတ်များ-ထုတ်ကုန်များ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သော PP ဖွဲနုအိတ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည်.မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့် PP ၏ထောက်ပံ့မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်/PE ထုတ်ကုန်များနှင့်ပစ္စည်းများ.ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပစ္စည်းများ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/rice-bran-bags.html
အကောင်းဆုံး ဆန်ဖွဲအိတ်များ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် ဆန်ဖွဲအိတ်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ